« Telma coupe de mada » – Lalao 32 hotontosaina manerana ny Nosy - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
« Telma coupe de mada » – Lalao 32 hotontosaina manerana ny Nosy
Amin’ny faran’ny herinandro izao no hanomboka ny fifanintsanana
Hotontosaina amin’izao faran’ny herinandro izao, ny 1/32-n-dalana ho an’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, izay hidiran’ireo ekipa tsy nandray anjara tamin’ny lalao savaranonando amin’izay.
Kianja roa no hampiasain’ny ligin’Analamanga handraisana ireo lalao valo voatendry hotontosaina eo amin’ny faritra misy azy amin’izany. Ankoatra an’Analamanga dia samy hampiantrano lalao avokoa ireo faritra maro manerana ny Nosy. Lalao 32 no handeha amin’io faran’ny herinandro io.
Isan’ny andrasana eto Antananarivo ny fihaonana eo amin’ny Japan Actuel’s sy ny Hezami, izay efa niseho teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ Analamanga, ka nahatafavoaka ho mpandresy hatrany ny ekipan’i Manjakaray. Hamarana ny tontolo andron’ ny zoma eny Bevalala izany. Toy izany ihany koa ny fihaonana eo amin’ny IFC sy ny AS Andry avy any Bongolava, izay horaisin’ny kianjan’Alarobia, amin’ ny sabotsy. Ny Tana Formation sy ny Espoir Tana kosa no lalao sangany amin’ny alahady izao eny amin’ny kianjan’Alarobia.
Zoma 6 jolay 2012 (Bevalala)
12 ora 30: Cospn # Dartline
2 ora 30: Japan # Hezami
Sabotsy 7 jolay 2012 (Alarobia)
10 ora 30: AS Saint Michel # CFSL Santos Bevalala
12 ora 30: Cosfa # Galactic FSA
2 ora 30: IFC # AS Andry
Alahady 8 jolay 2012 (Alarobia)
10 ora 30: Ajesaia # Fanilo
12 ora 30: Adema # FCAZ Analamanga
2 ora 30 : Tana FC # Espoir Tana
Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 09:37	FIARAHAMONINA